Dowladda Soomaaliya oo la eedeeyey | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo la eedeeyey
Jowhar (KON) - WaxgaradkaGobolka Sh/dhexe ayaa Eedeen dusha kaga tuuray Dowladda Federalka Soomaaliya oo ku aadan in aysan wax ka qaban Dagaalo Beeldeedyo ka dhacay Gobolkaasi.
Waxay tilmaameen Odayaasha dhaganka ee Gobolka Sh/dhexe in Dowladda Soomaalia ay indhaha ka qarsatay Dagaal Beeleedka ka soo cusboonaaday Tuulooyinka hoostaga Magaalada Jowhar.
"Iskaba daa in ay Dowladda Dagaalkaan wax ka qabato ama soo dhexgasho, xitaa kama aysan hadlin Arintaani, Isbaabi'iya miyaa loo fahmaa ka aamuska Dowladda" Ayuu yiri Maxamuud Yaasiin.
Afhayeenka Odayaasha Jowhar Maxamuud Yaasiin oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka fiirsanayaan la shaqeynta Dowladda Soomaaliya, maadaama uu xusay in ay Dowladdu hilmaantay Dadkeedii oo is dilaya.
Tuulooyinka dhaca Bariga Magaalada Jowhar ayaa maalmo ka hor waxaa ka dhacay Dagaal beeleedyo u dhexeeyey Labo Beelood oo wada daga Gobolka Sh/dhexe dagaaladaas oo ay ku dhinteen dad farabad kuwo kalena ay ku dhaaca.
Ilaa iyo hada ma jirto Wax hadal ah oo ka soo baxay Maamulka Gobolka Sh/dhexe taa oo ku aadan Dagaal Beeleedka ka dhacay Gobolkaasi, waxaana wali is hor fadhiya Maleeshiyadii dagaalamay kuwaa oo la filan karo in ay mar labaad is dagaalaan.